Ho an’ny tanin-janako – Blaogin'i Voniary
Raha raisinao ho tanin-janaka koa fa tsy tanindrazana fotsiny i Madagasikara dia hiova ny toe-tsainao. Fantaro fa izay fihetsika ataonao rehetra, na tsara io na ratsy dia hisy fiantraikany amin’ny taranaka any aoriana. Singanina indrindra eto ny lafiny fanajana sy fikolokoloana ny tontolo iainana. Mambole hazo, hajao ny fahadiovana, aza dorana ny ala dia mba ho tontolo meva sy Madagasikara maitso no holovain’ny zanaka aman-jafinao.
Fandrosoana mamaly ny filana ankehitriny nefa MITSIMBINA NY FAHAFAHAN’NY TARANAKA ANY AORIANA hamaly ny azy ihany koa. Izay ny famaritana ny fampandrosoana lovainjafy araka ny navoakan’ny Commission mondiale sur l’environnement et le développement tao anatin’ny rapport Brundtland tamin’ny taona 1987. Raha adika tsotra dia FIFAMPITSINJOVANA no tanjona. Voalaza fa tany tondra-dronono sy tantely ny tanintsika tany am-piandohana. Roapolo taona lasa mbola nihatra tsara ilay fiteny hoe « rahoviana vao ho ritra ny ala atsinanana ». Ankehitriny kosa anefa efa tandindonin-doza io ala mikitroka fahizay io ary ahiana ho ringana tanteraka noho ny teviala sy ny fitrandrahana arina ary kitay fandrehitra. Mba tsinjovy re ny taranaka fara aman-dimby e ! Ianao nandova tontolo maitso, madio, maha-te honina, koa aza avela hamantana tany karakaina, maloto sy foana ny taranakao !
Fambolen-kazo eto Madagasikara
Vanim-potoanan’ny fambolen-kazo indray eto amintsika amin’izao. Tahaka ny fanao isan-taona, mirohotra manatanteraka fambolen-kazo faobe ny ministera, orinasa, sampan-draharaha, sekoly ary ny fikambanana maro isan-karazany. Ny fanontaniana mipetraka dia hoe : misy fanaraha-maso ve ireny zana-kazo novolona ireny ? Firy isan-jaton’ireny no mitombo ara-dàlana ka tonga hazo lehibe ? Tokony ahavaly ireo ny tompon’andraikitra mitarika ireny hetsika fambolen-kazo ireny raha HANOLO IREO HAZO RINGANA tokoa no tena tanjony. Fa ho anao izay mandray anjara amin’ny hetsika, mba voavolinao tsara araka izay tokony ho izy ve ilay zana-kazo ? Anjaran’ny tsirairay no mandinika sy mahatsapa tena ! Tsarovy fotsiny fa mety tsy ho ianao fa NY TARANAKAO NO TSY HANAN-KIALOFANA raha tsy mamboly hazo ianao amin’izao.
Fikajiana ny tontolo iainana
Endrika voalohany amin’ny fanomezan-danja ny tontolo iainana ny FITANDROVANA NY FAHADIOVANA. Hoy ilay solontenan’ny mponina eny amin’ny faritra iva, raha natsafaina mikasika ny tondra-drano izy, indray mandeha : « Ny fanjakana mihitsy izany no tsy mandray andraikitra e ! Jereo ny tatatra tsentsina tsy hita izay ataony, dia izao, miakatra ny rano ! » Tsy vitsy ny olona manana toe-tsaina toy izany : manilika andraikitra sy manameloka ny hafa hatrany amin’izay manjo azy. Tsy iza anefa no nahatonga ny lalan-drano tsentsina fa ny tsirairay izay manary ny fakony eny rehetra eny : arona sase, tavoahangy plastika, fatin-taratasy, voro-damba sy ny sisa. Raha miezaka kely anefa ianao, ny TSY MANARINARY FAKO eny an-dalambe sy eny amin’ny toerana tsy natokana ho amin’izany dia efa manova zavatra betsaka izany.
Hamaranako azy dia ity : « Tanin-janaka, tanin-taranaka no andraisana ity Madagasikara ity fa tsy tanindrazana fotsiny » Hoy Môssieur Njo. Ny razana efa nahavita ny fiainany ary omena ny haja sahaza azy. Ianao, efa miaina amin’izao fotoana izao, mandova izay napetraky ny razana ary mijinja izay nafafinao (na tsara na ratsy). Ary ny taranakao, inona no holovainy ?
fambolen-kazo antananarivo, Fampandrosoana lovainjafy, fikajiana tontolo iainana, fitiavan-tanindrazana, tanin-janaka, tanindrazana
Ben J : « fanehoana fitiavan-tanindrazana ny fambolen-kazo »
2 commentaires sur “Ho an’ny tanin-janako”
Tena mety tokoa ilay fizana hoe : « Tani-janaka » fa tsy « Tanindrazana ».
Ny zoky olona dia natao hiaro ny zanaka aman-jafy !
Ny fitondra-tenan’ny mpiandraikitra era-tany – tsy mijinjo ny ho avy – dia toan’ny fiteny malagasy « Raha razana tsy hitahy, fohazy hiady vomanga ». Nambaran’i Greta Thunberg nanolohana ny Firenena Mikambana izany :
Miantso fanajana ilay hoe tanindrazana satria ao ireo razana namela mamy ho antsika. Fa ilay taninjanaka miantso asa sy fitsinjovana ny taranaka any aoriana mba ho tany soa no holovain’izy ireo. Nisy nandika tamin’ny teny gasy io lahatenin’i Greta Thunberg io: